Imidlalo yobuchopho 🥇 dlala kwi-Intanethi simahla kwi-Emulator
Imidlalo yeBongo. Ukuphuhlisa ingqiqo esengqiqweni ngoku Imidlalo yeBongo ibalulekile. Ayikuncedisi nje kuphela ukufumana iziphumo ezilungileyo kudliwanondlebe lomsebenzi okanye kwiimviwo zekholeji, kodwa ikwanceda ukugcina ingqondo yakho isebenza, ukuphucula imemori, nokwenza imisebenzi elula kube lula ukuyenza .
Ukuba ucinga ukuba awuyiqeqeshanga ingqondo yakho okwethutyana, kuya kufuneka uqale uyenze. Kuya kufuneka uyazi ukuba yabo amandla ophuhliso nokufunda ihleli de kube sekupheleni kobomi, ke ayikaze ibe semva kakhulu ixesha lokuqeqesha ukucinga kwakho.
I-BrainGames: indlela yokudlala inyathelo ngenyathelo?
Ukudlala abahloli kwi-intanethi simahla, nje landela le miyalelo ngamanyathelo ngamanyathelo :
inyathelo 1 . Vula isikhangeli sakho osithandayo kwaye uye kwifayile Isiphelo sendlela umdlalo Website.
inyathelo 2 . Nje ukuba ungene kwiwebhusayithi, umdlalo sele uza kuboniswa kwiscreen. Kufuneka ucofe nje umdlalo kwaye ungaqala ukudlala.
Inyathelo 3. Nanga amanye amaqhosha aluncedo. Unga " Yongeza okanye susa isandi ", betha" umdlalo "iqhosha kwaye uqale ukudlala, unga" Misa isikhashana "And" Phinda Uqalele "nangaliphi ixesha.
Inyathelo 4. Yenza amakhadi ugcine engqondweni ukuba kufuneka ukuba avela kwisibini esinye. Umdlalo uphela xa ulawula ukuphakamisa onke amakhadi. Wakugqiba nje, uya kudlula kwinqanaba de ugqibe umdlalo.
Inyathelo 5. Emva kokugqiba umdlalo, cofa "Phinda Uqalele" ukuqala ngokutsha.
Intsingiselo yoMdlalo weBongo 🙂
Imidlalo yeBongo, okanye imidlalo yokuqiqa , yimidlalo evuselelayo kwaye ikhuthaze ukuqiqa okuqiqayo komntu ukuze kuphunyezwe ngokufanelekileyo.
Le midlalo inempawu yokuphuhlisa icala loluntu, Ukwenza ukuba umsebenzisi asebenzise, ​​ukuya kuthi ga kwinqanaba elikhulu, kwicala labo lobukrelekrele ukufikelela kwisisombululo esifanelekileyo.
Le midlalo yokuqiqa isetyenziswa ngokubanzi ngabanyangi. Zombini iingcebiso zonyango, njengenxalenye yesiqhelo kwiindawo zokuhlala, abantu abadala bayazenza ezi zinto ukuzilolonga ngengqondo ukuthintela izifo.
Imizekelo yoMdlalo weBongo ibandakanya amagama aphambili, igama puzzleamaqhina, sudoku puzzle kunye nexesha elide, njl.
Izibonelelo zeMidlalo yoMdlalo weBongo🤓
Ukuzilolongela ingqondo kuluncedo kakhulu. Ngokwezifundo, ezithile imithambo yoqeqesho kwimemori inokunyusa "ukuhamba kobukrelekrele," Ukukwazi ukuqiqa nokusombulula iingxaki ezintsha.
Zimbini iindlela zomdlalo weMidlalo yeBongo. Nazi ngamnye imidlalo nemidlalo yamaqela.
Midlalo yoMntu ngamnye yeBongo khuthaza ukuqiqa, ukuhlalutya, ukuqiqa ngokubonakalayo, ulungelelwaniso lweemoto, inkumbulo yokusebenza kunye nokucinga okulandelayo.
Xa umntu edlala yedwa, bafumana umzuzu wokungena ngamandla kwaye basebenzise amandla abo ukutolika nokusombulula iingxaki . Ngelo xesha, unakho ukwenza iinkqubo zokuhlalutya kunye nokusebenza kobomi.
Imidlalo yokudibanisa , kwelabo icala, linganisa iimeko zokhuphiswano kunye / okanye zokusebenzisana , ukwenza zonke izakhono ezichazwe apha ngasentla, ukongeza kubudlelwane phakathi kwabantu.
Ngoku ekubeni sizazi izibonelelo zokuba nengqondo esebenzayo, kuya kuba ngcono zibandakanya ukuzilolonga kweMidlalo yeBongo kwindlela yethu yemihla ngemihla ngolungelelwano ukuxhamla kolu phuculo kunye nokufumana ingqondo enkulu.
Iindidi zeMidlalo yeBongo 💡
Umdlalo wenziwe yiAmerican Howard Garns kwaye unceda kwi uqeqesho lokuqiqa ngengqondo kwemathematika, ukugxila nokucwangcisa . Ungayifumana kwi-intanethi okanye kwiimagazini.
Ukudlala abahloli kusenza usebenzise zombini iingqondo zengqondo . Iingcali zengqondo kunye neengcali ze-neurobiologists ziye zafunda indlela imidlalo yeqhinga elinceda ngayo ukusebenza kwengqondo, kwaye kuye kwafunyaniswa ukuba ukudlala iitshekhi kubangela izihlwele zeendawo zobuchopho ukuba zisebenze ngaxeshanye, ezikunceda ukukhusela i-Alzheimer's.
Ukusuka kubadali abafanayo beentaka ezinomsindo, umdlalo omangalisayo weAlex ukhuthaza umsebenzisi ukuba Ukuphuhlisa izakhono zabo zobuchule ukusombulula iingxaki ezibonisiweyo kunye nokudlula kwinqanaba.
Kulo mdlalo umsebenzisi unenjongo yokudibanisa iityhubhu ezinemibala efanayo kunye nokwenza ulandelelwano. Kukho imiceli mngeni emininzi ethi ukunceda ngokuqiqa, ekusombululeni iingxaki, ukukhawuleza, kunye nokugxila.
Umdlalo wakudala osakwaziyo ukutsala abadlali kwihlabathi liphela. Isiseko silula: kuba nakho yenza amagama embindini wethaneli yoonobumba abangahleliyo . Ukongeza kwiinguqulelo eziprintwe kwiimagazini, kunokwenzeka ukuba ufumane umdlalo kwiinguqulelo ezihambayo.
Kuthathwa njengomdlalo, umdlalo wechess phucula ukucinga, uyilo, ukukhula kwezentlalo, ukuqonda kunye nezakhono zonxibelelwano . Ukongeza, umdlalo ulwalamano olubalulekileyo kuqeqesho lobuchopho. Umdlalo ungadlalwa ngokwasemzimbeni okanye kwi-Intanethi kwiwebhusayithi yomdlalo wechess kunye nokusetyenziswa.
Ngale midlalo yeBongo unokuyiqeqesha ingqondo yakho kwaye ube nakho ukujongana ngcono nemibuzo enengqondo, nokuba yeyakho kwiimviwo zakho okanye kuba ufuna ukugcina ingqondo yakho ikwimo entle.
Imigaqo yeBongo yeMidlalo📏
Imidlalo yeLogic ayinayo imigaqo yendalo iphela, nganye idlalwa ngemithetho yayo, kodwa inento efana ngayo.
Kufuneka si sebenzisa ulwazi lwengqondo njengokujonga, ukuqaphela, ukuchonga, ukuthelekisa, ukubeka. Kwaye usebenzise ingqiqo, ukucwangcisa kwangaphambili, ukuthatha izigqibo kunye ne-intuition ukwazi ukudlala imidlalo ngokutyibilikayo nangobuchule.
Njengoko Umzekelo woMdlalo weBongo singasebenzisa ichess . Ukuba sifunda imigaqo yayo, iintshukumo ezithile, iindlela ezinokulandelwa ukuhlutha iziqwenga kumchasi size sigqibe ngokubulala uKumkani, singafumana umbono wokuba lintsokothe ​​kwaye luyamnandi njani olu hlobo lokuzonwabisa engqondweni yethu.
Iingcebiso zeMidlalo yeBongo 🤓
Imidlalo yeLogic ibeka umceli mngeni kwingqondo yethu, kwanomonde wethu. Xa ukhetha umdlalo weBongo, qala ngemidlalo elula ecelomngeni ingqondo yakho.
Ezinye zilula kodwa ziyonwabisa imidlalo yememori . Qala ngokukhumbula indawo kunye nokuzoba kwamakhadi ambalwa, kwaye wandise inani njengoko amandla akho okubamba enyuka. Ngaphandle kokuba ngumvuzo, yi umdlalo kuyo yonke iminyaka , ukuze udlale nabantwana bakho.
Eyona njongo iphambili yale midlalo iyonwabisa, kuba ngokuzonwabisa, ziya kuyenza ingqondo yakho ingadinwa ngokukhawuleza kwaye izakhono zokuqonda ukuba le mingeni ibonisa ngophuhliso , ndingaqondi.
Thatha ithuba Izibonelelo ezininzi ezibonelelwa yiMidlalo yeBongo kwaye wonwabe ngamawaka emidlalo akule ntsapho.
Ulinde ntoni ukubetha umdlalo?